बजाज मोटरसाइकलको मूल्य वृद्धि, कति छ नयाँ मूल्य ? - सिम्रिक खबर
बजाज मोटरसाइकलको मूल्य वृद्धि, कति छ नयाँ मूल्य ?
बजाज मोटरसाइकलको आधिकारीक वितरक हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले बजाज मोटरसाइकलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले पल्सर सिरिजदेखि डोमिना र एभेन्जरसम्मको मूल्य बढाएको छ । कम्पनीले पल्सर १२५ को मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन पल्सर १२५ को मूल्य २ लाख २६ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । करिब एक महिनाअघि मूल्य बढाएको बजाजले पल्सर १५० मा ३ हजार रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । कम्पनीले यसको मूल्य २ लाख ६० हजार ९०० निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरि पल्सर सिरिजको १५० टिडीको मूल्य २ लाख ७१ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमा कम्पनीले १ हजार रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो । पल्सर एनएस १६० को मूल्यपनि कम्पनीले १ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । यसअघि यसको मूल्यभने कम्पनीले बढाएको थिएन ।यसको नयाँ मूल्य २ लाख ९० हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बजाज पल्सर २२० एफको मूल्य भने परिवर्तन भएको छैन । कम्पनीले यसको मूल्य ३ लाख ३६ हजार ९०० रुपैयाँ तोकेको छ । पल्सर एनएस एबीएसमा कम्पनीले १ हजार रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । कम्पनीले यसको नयाँ मूल्य ३ लाख ३९ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ भने पल्सर एनएस एफआई र एबीएस सहितको मोडलमा २ हजार रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । कम्पनीले यसको नयाँ मूल्य ३ लाख ६० हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको एभेन्जर स्ट्रीटको मूल्य ३ लाख १९ हजार ९०० र एभेन्जर क्रुजरको २२० को मूल्य ३ लाख ४५ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । बजाज डोमिनारको मूल्य भने कम्पनीले १५ हजारले बढाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य अनुसार डोमिनारको मूल्य ५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले ल्याएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्लाटिनाको मूल्य १ लाख ७२ हजार, डिस्कभर १२५ ड्रमको १ लाख ९२ हजार, डिस्कभर डिस्कको १ लाख ९९ हजार, डिस्कभर एसटीको २ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।